Unemployment Insurance Extension Under CARES Act - Somali | iowaworkforcedevelopment.gov - www
Unemployment Insurance Extension Under CARES Act - Somali
Waaxda Horumarinta Shaqaalaha ee Lowa waxay bixinaysaa adeegyo tarjumaad oo bilaash ah dadyawga u baahan inay fahmaan Ingiriisiga.
Hadii aad hayso su'aal la xiriirta caymiska shaqo la'aanta, fadlan wac 1-866-239-0843 adeegyo tarjumaad oo bilaash ah waqtiyada u dhexeeya 8:30 a.m. iyo 4:30 p.m. Isniinta, Salaasada, Arbacada, Khamiista, iyo Jimcaha.
Xeerka KAALMADA KORONAVIRUS, GARGAARKA IYO XASILOONADA DHAQAALAHA (DARYEEL): XEERKA DARYEELKA
Madaxweyne Trump wuxuu saxiixay sharci ku saabsan qodobbada Xeerka DARYEELKA. Sharcigan wuxuu kordhinayaa helitaanka dheefaha caymiska shaqo la'aanta kuwa iyagu iskood u shaqeysta, shaqaalaha qandaraaslaha ah, kuwa aan u qalmin dheefaha shaqo la'aanta gobolka ama dhamaystay dhamaan dheefahoodi. Faa'iidooyinkan dheeraadka ah ayaan wali la heli doonin. Waxaan gacanta ku haynaa isbeddelada lagu sameynayo barnaamijka caymiska shaqo la'aanta. Waxaan kugula socodsiin doonnaa wixii soo cusboonada boggayaga internetka, xarumaha warbaahinta iyo baraha bulshada. Wakiilada adeegga macaamiishu ma hayaan macluumaad dheeri ah waqtigan.
Haddii ay saamayso dheefahaaga, waanu kula soo socodsiin doonnaa.
OGSOONOW: Sharciga DARYEELKU wuxuu bixiyaa lacag bixin shaqsiyeed gaaraysa ilaa $ 1,200, oo lagu daray $ 500 oo dheeraad ah ilmo kasta oo uqalma oo da'diisu tahay 16 ama ka yar. Lacag bixintani lama xidhiidho dheefaha shaqo la'aanta, waxaana si toos ah u bixin doonta dowladda federaalka iyadoo ku saleysan macluumaadka laga helo waaxda Adeegga Dakhliga Gudaha (IRS). Uma baahnid inaad ku dalbato lacag-bixintaan IWD. Waaxda IRS waxay macluumaad dheeri ah ku bixin doontaa degelkeeda marka lasoo galiyo: https://www.irs.gov/coronavirus"
Su’aal: Yaa u qalma dheefaha shaqo la'aanta sida ku cad Sharciga DARYEELKA?
Jawaab: Shakhsiyaadka iskood u shaqeysta, shaqaalaha qandaraaslayaasha madaxa banaan, shaqaalaha samafalka, iyo shaqaalaha onlin-ka ku shaqaysta, kuwa aan u qalmin dheefaha shaqo la'aanta gobolka ama dhamaystay dhamaan dheefihii loogu talogalay.
Su’aal: Haddii aan iskay u shaqaysan jiray, ma u baahanahay inaan xareysto arjiga shaqo la'aanta?
Jawaab: Y Haa, waxaad u baahan doontaa marka hore inaad fayl garayso sheegasho khadka tooska ah si aad u aragto inaad u qalanto dheefaha caadiga ah ee Lowa. Kadib markaad arji gudbiso, sii wad inaad ka eegto bartayada internetka wixii ku saabsan macluumaadka cusub ee loo baahan yahay.
Su’aal: Haddii aan helayo dheefo, ma u baahanay inaan xareysto codsiga shaqo la'aata si aan u helo dheefta lacag bixinta dheeraadka ah ee $600?
Jawaab: Maya, haddii aad gudbisay codsiga shaqo la'aata oo hawshana gacanta lagu hayo ama aad leedahay sheegasho shaqo la’aaneed oo hore u jirtay, ma jiraan wax kale oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u hesho dheefaha dheeraadka ah. Waxaan bilaabaynaa bixinta lacagahaas marka ay diyaar noqdaan.
Su’aal: Shaqo la'aan ayaan noqday todobaadki lasoo dhaafay, dhamaan dheefahaygiina waa dhamaadeen. Wali waxaan ku gudo jiraa sanadkaygii dheefta waxaana la ii sheegay in aanan fayl gareyn karin mar labaad ilaa ay sheegashadeydu ka dhacdo. Miyaan u baahanay in aan xareysto codsiga shaqo la'aanta si aan u helo lacagta dheeriga ah ee ay ansixiyeen golaha sharci dejintu ee Xeerka DARYEELKA?
Jawaab: Maya, uma baahnid inaad xareyso codsi cusub. Marka ay diyaar noqdaan dheefaha la kordhiyay, macluumaad dheeri ah ayaa lasoo dhigi doonaa mareegtayada. Dhammaan codsadeyaasha ay dheefahoodu dhamaadeen wixii ka dambeeyey 02/02/20, mid kasta oo ka danbeeya, waxaa loo gudbin doona dheefaha la kordhiyay.
Su’aal: Sideen ku ogaanayaa haddii aan uqalmo dheefaha shaqo la'aanta?
Jawaab: Waanu kula soo socodsiineynaa kadib markaad xareyso codsiga shaqo la'aanta. Ma go'aamin karno inaad u qalanto iyo in kale ilaa aanu helno codsigaaga.
Macluumaad Dheeri ah: Sabtidii, Waaxda Shaqada ee Mareykanku waxay soo saartay hagis ah qaab su'aal iyo jawaabo ah oo lagu cadeynayo shuruudaha muhiimka ah ee Sharciga Mudnaanta Qoysaska ee Caabuqa Koroona Fayras ee ku saabsan bixinta mushaharaadka bukaanka iyo ballaarinta fasaxa caafimaadka iyo qoyska. Shuruudahan cusubi waxay dhaqan galayaan Abril 1, 2020 waxayna dhacayaan Diseembar 31, 2020.
Saamaynta Gobol: Su'aalaha ka imanaya sida digreetadan cusubi u saamayn doonto gobolka iyo dawladaha hoose ee adeegsanaya jawaabayaasha ugu horreeya, hagaha ayaa bixinaya caddeyn ah Su'aasha 38 ee sheegaysa: "Haddii aad shaqaaleeysiiso bixiye daryeel caafimaad ama ka falceliye xaalad degdeg ah looma baahna inaad siiso shaqaalahaas mushahar jirro ama aad u kordhiso fasaxa caafimaadka iyo qoyska adigoo xaalad xaalad u eegaya. ka tag ama fasaxa caafimaadka iyo fasaxa caafimaad ku daraya kiis xaalad ahaan. Ganacsiyada yar yari qaarkoodna way ka dhaafi karaan shaqaalaha fasaxa hadii uu wax u dhimayo shaqada shirkada tahayna arin walaac leh.”